Qareen ka mid ahaa qareenadii difaacayey Kiiska ama Dacwadda Badda Soomaaliya oo shaqadii ka baxday | Baligubadlemedia.com
Qareen ka mid ahaa qareenadii difaacayey Kiiska ama Dacwadda Badda Soomaaliya oo shaqadii ka baxday
Mid ka mid ah qareennada hoggaaminya kiiska badda ee soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda Caalamiga ah ee ICJ, ayaa ka baxday guddiga qareennad ee difaacayay doodad Soomaaliya, sida ay xaqiijisay dowladda.
Cali Siciid Fiqi, safiirka Soomaaliya u fadhiya xarunta Midowga Yurub oo la hadlay Telefishinka Qaranka Soomaaliya ee SNTV ayaa xaqiijiyay in Muno Sharmaan ay “ka baxdayday qareennada difaaca kiiska Soomaaliya”.
“Waa gabar Soomaaliyeed, kiiska maalintii ugu horreysay illaa iyo goor dhow ayey ku jirtay. Muddo afar bilood laga joogo, ayey madaxweynaha la soo hadashay”, ayuu yiri Safiir Cali Siciid Fiqi.
Isagoo sharaxayay sababta ay qareennada uga baxday wuxuu sheegay in “ay u wareegtay shaqo kale oo ay ka heshay meel kale”.
“Waxay tiri ‘madaxweyne shaqo ayaan ka helay Bangiga Adduunka. Marka waan ka cudur daaranayaa”, ayuu yiri safiirka.
Safiirka Soomaaliya u qaabilsan Midowga Yurub, Cali Siciid Fiqi, ayaa yiri: “Muna qof raacdeyn kara ma jiro; waa gabar Soomaaliyeed oo muwaadin ah oo runtii istaahisha in loo abaal gudo”.
Muna Sharmaan waxay ka mid ahayd qarreennadda ugu firfircoonaa ee doodaha adag la hor tagay ICJ xilligii ay socotay dhageysigii la xiriirtay in kiiska u dhexeeya Soomaaliya iyo kenya ay maxkamadda dhageysan karto.
“In la yiraahdo Muna meeshii waa laga saaray, ceebbey Soomali oo dhan u tahay”, ayuu carabka ku adkeeyay Safiirka oo la hadlay SNTV.
Muna Sharman iyo Safiirka Soomaaliya ee EUSafiirka Soomaaliya ee EU (bidix) iyo Muna Sharmaan (dhexda)
Dr. Muna Sharmaan waxay Soomaaliya u mataleysay dacwada xuduudda badda ee kala dhaxeysay Kenya, waxayna si wayn uga hadashay sida Soomaalida u aragto “heshiiskii isfahamka” ee Kenya ay ku doodeysay.
Hadda, ma jiro wax war ah oo dhankeeda ka soo baxay oo sharaxaya sababta ay uga baxday qareennada Soomaaliya matalaya.
Safiirka Soomaaliya u qaabilsan EU, wuxuu sidoo kale beeniyay in Soomaaliya ay qoratay qareenno cusub. “Qareennadda waa kuwii maalintii ugu horeysay ee aan kiiska badda geynay ee 2014-kii”, ayuu yiri.
Hadlakiisan aya jawaab u ah warar baraha bulshada lagu hadal hayay oo sheegayay in qareennada difaacayay Kiiska Soomaaliya la badalay.
Wuxuu ku adkeystay: “Waa kuwii kiiska ku dhex jiray; waa kuwii maxkamadda yimid ee daafacay; waa kuwii dacwaddii soo qoray; waana kuwa hadda u taagan in kiiska ay difaacaan”.
Wuxuu dadka Soomaalida u sheegay in “khalkhalka iyo siyaasadeynta maxkamadda aan lagu niyad jebin”.
Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa 17-kii bishan sheegtay in markale ay dib u dhigtay dhageysiga dacwadda la xiriirta muranka xuduudda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in go’aankan ay gaartay ka dib markii ay dhagaysatay labada dhinac, balse waxay caddeysay in mar kale aan dib loo dhigi doonin.
Maxkamaddu waxay sidoo kale fartay Kenya iyo Soomaaliya in ay ka soo qeybgalaan dhageysiga dacwaddaasi marka laga gaaro xilliga ay haatan u asteysay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u hoggaansameyso go’aanka maxkamadda, ayna marnaba ka tanaasuleyn taako ka mid ah dhulka Soomaaliya.